Izinqolobane ZikaRobb Fraley - Ilungelo LaseMelika Lokukwazi
UKeith Kloor: Indlela intatheli yesayensi esebenza ngayo ekusithekeni nabalingani bemboni
Posted on November 1, 2018 by UStacy Malkan
UKeith Kloor uyintatheli ezisebenza ngokuzimela futhi uyilungu le-adjunct journalism faculty e University of New York obhalele i- Imvelo, Isayensi Ngaphakathi, Isilayidi kanye nezindatshana eziningi ze- Thola Umagazini ukugqugquzela ukudla okwenziwe ngezakhi zofuzo nokuhlasela abagxeki bemboni yezolimo, kuyilapho kusizwa nabalingani bemboni ekusithekeni.
Ama-imeyili atholwe yi-US Right to Know, athunyelwe ku- Umtapo Wezincwadi Wemibhalo Yezimboni ze-UCSF, iveze izimo lapho uKloor aqeqesha futhi ahlela khona imithombo yakhe, afihla izimboni zomthombo womthombo, futhi abike ngokukhethekile ngolwazi ngezindlela eziqinisa ukulandisa kwemboni. UKloor unqabile ukuphendula imibuzo yalesi sihloko.
Ukukhululwa kokukhetha, okukhethiwe kwama-imeyili we-FOIA
Kusukela ngo-2015 kuya ku-2017, iKloor ibike ukuthi Nature, Isayensi Insider, Discover, Izinkinga Kwezesayensi Nobuchwepheshe, Futhi Slate on a uphenyo lwamarekhodi womphakathi yi-US Right to Know eveze ubudlelwano obungadalulwanga phakathi kwemboni yezolimo kanye nezifundiswa ezixhaswe esidlangalaleni ezithuthukisa imikhiqizo yezolimo, kufaka phakathi USolwazi Kevin Folta wase-University of Florida. Kuzozonke izingcezu ezishicilelwe, uKloor wafaka izicelo zamarekhodi omphakathi njengomthwalo ongadingekile kwizifundiswa.
Ama-imeyili atholakele ngezicelo zamarekhodi wombuso aveza ukuthi uKloor uqobo wayeyingxenye yendaba ayebika ngayo; ubekade ehambele izingqungquthela zokuqeqesha imiyalezo ezixhaswe umkhakha wezolimo noDkt. Folta futhi wasiza uDkt Folta ngokuthumela imiyalezo. Ukuxhumana kukhombisa ukuthi uDkt Folta welule isandla kuKloor ukuze asikisele ukuthi akhululwe ama-imeyili akhe “ngaphambi kokulungiselela” ukusiza ukunciphisa umonakalo wamadokhumende - uKloor akwenzayo, kumagazini Nature. Ngesikhathi esifanayo lapho uKloor ebekhuluma ngendaba yezincwadi eziphambili zesayensi, amadokhumende akhombisa ukuthi wabamba iqhaza ezingxoxweni nabangaphakathi embonini mayelana nezinselelo ezibangelwa izicelo zamarekhodi omphakathi.
Umugqa wesikhathi wokubika nokusebenzisana:
Mashi 2014: UKloor waya kwi Ikamu lokuqala le-Biotech Literacy Project, ingqungquthela exhaswe ngezimboni yokuqeqesha ososayensi nezintatheli ungayihlela kanjani impikiswano ngama-GMO kanye nezibulala-zinambuzane. Ingqungquthela ibisingathwe nguDkt Folta futhi ihlelwe ngu Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project futhi Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, amaqembu amabili abambisana neMonsanto kumaphrojekthi wobudlelwano bomphakathi.
Julayi 2014: IMonsanto yavuma ukuxhasa isiphakamiso sikaDkt Folta ngama- $ 25,000 emicimbini yokuphromotha uDkt Folta ayichaze “njengesixazululo enkingeni yokuxhumana nge-biotech” eyavela emikhankasweni yesishoshovu yokuqamba ama-GMO amagama. (UFolta unikele ngemali ebhange lokudla ngemuva kokuthi isiphakamiso sesivele esidlangalaleni.)
Ama-imeyili akhombisa lokho ngo-Agasti futhi Novemba ka-2014, UKloor unikeze uDkt Folta izeluleko zemiyalezo mayelana nokuthi ungabaphikisa kanjani abagxeki be-GMO (bona izibonelo ezingezansi).
NgoFebhuwari 2015: I-US Ilungelo Lokwazi uthumele izicelo zamarekhodi womphakathi ukubhalelwa nokubuya oprofesa emanyuvesi kahulumeni, kubandakanya noDkt. Folta, ukuphenya ukusebenzisana okungadalulwanga nemboni yezolimo.
NgoFebhuwari 2015: UKloor wabhala ngophenyo lwe-USRTK lwe- Isayensi Insider, becaphuna uDkt. Folta kanye nabanye ababambisene naye embonini "abadonswa" izicelo ezirekhodiwe ezichazwe ngokuthi "uhambo lokudoba" olungaba "nethonya elikhulu enkululekweni yezemfundo."
Mashi 2015: UKloor unikele isethulo kuCornell Alliance for Science, a Iqembu lephromoshini le-GMO kwakuyi umkhankaso wokulwa nezicelo zamarekhodi womphakathi.
NgoJuni 2015: UKloor uvele embonini yesibili exhaswa ngemali yimboni Ikamu lokuqala le-Biotech Literacy Project ukuqeqeshwa komlayezo obubanjelwe e-UC Davis, kuphaneli ukuze xoxa "Ngezinselelo ze-FOIA" noDkt. Folta kanye noProfesa Emeritus Bruce Chassy wase-University of Illinois, okuthe kamuva ama-imeyili aveza ukuthi naye wayekhona ukuthola imali ngasese eMonsanto.
Agasti 1, 2015: UDkt Folta uthumele i-imeyili uKloor ukubika ukuthi ama-imeyili akhe adluliselwe e-US Right to Know ngokuphendula izicelo ezirekhodiwe ezivulekile. “Ngiqale ukubhekana nalokhu izolo ebusuku futhi Ngicabanga ukuthi ukukhishwa kokulungiselela kwezinto kungumqondo omuhle, kepha ngokukhetha, ”Kubhala uDkt Folta. Uphakamise ukwakhiwa “okuveza ubungozi bemithetho ye-FOIA.”
Agasti 6, 2015: UKloor ubike ngama-imeyili ngokuxolela i-athikili ye-Nature. Ama-imeyili “awasikiseli ukungaziphathi kahle ngokwesayensi noma ukwenziwa okungalungile nguDkt. Folta. Kodwa bayabudalula ubudlelwano bakhe nesikhulu sezolimo iMonsanto, ”kubika uKloor.
Agasti 8, i-2015: UJon Entine, Owahlela amakamu ebhuthini lokuthumela imiyalezo atholakalayo, ukhalaze kuKloor ngokusebenzisa kwakhe igama elithi "ubuhlobo obuseduze" ukuchaza ubudlelwane bukaDkt Folta noMonsanto. “Kokungalungile futhi kungukuvuvukala. Akukhombisi kahle ukuthi yikuphi okunye okwakubikwa isigaba sokuqala, ”kubhala u-Entine. UKloor uthe leli gama "liyaphikiswa" kodwa wahlehla kulo: "Ekuzivikeleni kwami, angikubhalanga lokho - kufakwe ezinhlelweni zokugcina." Ube esencoma u-Entine ngama-imeyili: “Mina nawe kufanele sikhulume. Ukule imeyili. ” IKloor nayo yayikhona kuma-imeyili, angazange asho ekubikeni kwakhe. (Izicelo ezalandela zavela ama-imeyili amaningi afaka iKloor.)
Septhemba 5, 2015: a ikhasi lokuqala ekhasini le-New York Times ngu-Eric Lipton owanqoba kathathu umklomelo wePulitzer Prize ubike ukuthi uMonsanto waqasha izifundiswa, kubandakanya noDkt. Folta, ukuba alwe nokulebula kwe-GMO. I- Times ithunyelwe ama-imeyili avela kuDkt Folta futhi UDkt Chassy ukuveza izinkokhelo ezingaziwa zemboni kubo bobabili abesilisa kanye nokusebenzisana kwabo nezinkampani zezolimo kanye namafemu abo e-PR.
UKloor uqhubeke nokuzibandakanya kule mpikiswano njengentatheli yemicimbi yezimboni, njenge Isithangami sikaFebhuwari 2016 isingathwe yi-GMO Answers, a umkhankaso wokumaketha ukukhuthaza ama-GMO axhaswe yiBayer / Monsanto, Syngenta, BASF, neDowDuPont, futhi ephethwe yinkampani yezobudlelwano bomphakathi iKetchum.
UDkt Folta manje uyamangalela the New York Times no-Eric Lipton ngaphezulu kwendatshana ka-2015. UKloor ubike ngoDkt. Folta icala le Slate ngo-2017 ngaphandle kokudalula ukusebenzisana kwakhe manje nomphakathi noDkt Folta nabanye abangaphakathi embonini.
Ukuqeqesha, ukuhlela imithombo; kufihla ubuhlobo bemboni
Ama-imeyili akhombisa ukuthi uKloor usebenze nemithombo yakhe ekusithekeni ukucija imiyalezo yabo ukusekela imbangela yezimboni yezolimo: ukukholisa abathengi abaqaphile ukwamukela ukudla okwenziwe ngezakhi zofuzo. Enye yale mithombo kwakungu UDkt Kevin Folta, iNyuvesi yaseFlorida uprofesa owayengumuntu osemqoka uKloor evezwe ezindabeni azibhalela ezincwadini zesayensi ngokusebenza obala kwezemfundo.
Umkhankaso wokuguqula uBill Nye
NgoNovemba 2014, uKloor wasebenzisa eyakhe Discover blog ukufaka inselelo Ukugxeka kukaBill Nye mayelana nama-GMO nge "Incwadi evulekile eya kuBill Nye evela kuSosayensi Wezitshalo" esayinwe nguDkt. Folta. Ama-imeyili akhombisa ukuthi uKloor ubuzile UDkt Folta ukuphonsela inselelo uNye, weza nomqondo wencwadi evulekile futhi uqeqeshe uDkt Folta ukuthi abhalwa kanjani. Wabe-ke kuhlelwe i-biography kaDkt Folta ukugwema ukubalula imali yezimboni, ngokusho kwama-imeyili.
Ama-imeyili akhombisa ukuthi uKloor wabhalela uDkt. Folta uhlu lwezinto eziphilayo olufaka phakathi umugqa othi, “Alukho ucwaningo oluxhaswe yiMonsanto.” UDkt. Folta umcele ukuthi alungise leso sigwebo, ebona ukuthi iMonsanto ngokungaqondile ixhase eminye yemizamo yakhe yokufinyelela kubantu nge-biotech nokuthi uthole imali yocwaningo enkampanini encane ye-biotech. UKloor uthathe isinqumo ngomlando ongagwegwesi ukubalula ngezimali zemboni kaDkt Folta ngokuphelele: “Ucwaningo lwakhe luxhaswe yizinhlangano zombuso nezikahulumeni.”
Ku-imeyili engezansi, uKloor unikeze uDkt Folta umhlahlandlela wokuthi uyibhalela kanjani uNye incwadi:
Cishe ngaleso sikhathi, iMonsanto nayo yayinxenxa uNye ukuthi ashintshe isikhundla sakhe kuma-GMO, ekugcineni waphumelela ukwenza. Mashi 2015 Washington Post indaba mayelana nokuguquka kukaNye kwasho ukuthi ukugxeka kukaNye amaGMO “kwacasula ososayensi abaningi,” kodwa kwaxhunyaniswa kuphela nencwadi kaDkt Folta kubhulogi likaKloor.
Thola: "Akuyona inqubomgomo yethu yokwazisa imithombo"
Ama-imeyili avela ngo-Agasti 2014 akhombisa uKloor enikeza iseluleko semiyalezo kuDkt Folta kanye nomunye umthombo, uDkt Karl Haro von Mogel, umqondisi wezindaba Iqembu lephromoshini le-GMO iBiofortified. UKloor ubacele ukuba bahlaziye udaba lukaCarole Bartolotto, udokotela wezokudla obebhale ngokugxeka ngama-GMO. Ama-imeyili akhombisa lokho UKloor ukuhlelile ukuphawula nezindlela eziphakanyisiwe zokuqinisa imiyalezo: “Iseluleko sami: gcina ulimi lungathathi hlangothi futhi lungahluleli ngangokunokwenzeka. Ubheke abantu abahlala kocingo, abangahle bavinjwe ulimi olukhulunywa kabi. ”
UKloor uthumele ukugxekwa kweBartolotto kweyakhe Discover blog futhi wachaza uDkt. Folta no-von Mogel "njengososayensi ababili abangalutholi uxhaso embonini ye-biotech." Ama-imeyili kamuva aveze ukuthi, emasontweni ambalwa ngaphambili, iMonsanto yayinayo uvumile ukuxhasa ezikaDkt. Folta imizamo yokukhangisa yama-GMO; futhi, ehlobo eledlule, uDkt Folta wahlela ukuvakashela eHawaii eyonxenxa imingcele yokubulala izibulala-zinambuzane ohambweni ihlelwe futhi ikhokhelwa yiqembu lokuhweba lomkhakha wezibulala-zinambuzane (UDkt von Mogel naye wayefakiwe kulawo ma-imeyili). I-athikili kaKloor isavela ku- Discover iwebhusayithi ngaphandle kokuvuselelwa noma ukulungiswa.
Okwe-2017 Isihloko sokubhalwa kukaHuffington, kubuza intatheli uPaul Thacker Discover umhleli wephephabhuku u-Becky Lang ukuze aphawule ngama-imeyili eBartolotto. ULang unqabile ukuphawula ngokuningiliziwe, kodwa wathi: “Impela, akusiyo inqubomgomo yethu manje, futhi akukaze kube njalo, ukugqugquzela imithombo ukuthi ibhale ukugxeka, ukuhlela ukugxeka, bese ikwenza njengokuzimela. Futhi akuyona inqubomgomo yethu ukuthi imithombo yosizo izame ukufihla ubudlelwane bayo bemboni. ” (EzikaKloor Discover I-blog yaphela ngo- yaphela ngo-Ephreli 2015.)
UJon Entine, uxhumano lweProjekthi ye-Genetic Literacy Project
Imibhalo emikhulu kaKloor evikela imboni yezolimo ingabukwa kuwebhusayithi ye I-Genetic Literacy Project, iwebhusayithi yokwazisa yomkhakha wezolimo lokho izindatshana eziningi ebhalwe nguKloor noma ecaphuna umsebenzi wakhe. IGenetic Literacy Project ilawulwa nguJon Entine, osebenza isikhathi eside PR okhuthaza futhi avikele izintshisekelo zemboni yamakhemikhali. U-Entine unguthishanhloko we-PR firm ESG MediaMetrics, amaklayenti akhe afaka iMonsanto. AbakwaKloor no-Entine basebenzisa imiyalezo efanayo futhi babeke izingqinamba ngezindlela ezifanayo, futhi babonakala benobudlelwano obusondelene, ngokusho kwama-imeyili.
Nge-imeyili kaJulayi 2013 eya eqenjini lokwamukela izimboni zezibulala-zinambuzane, u-Entine uchaze uKloor njenge “umngani wami omuhle kakhulu”Ngubani ongasiza ekuthengiseni umhlangano nomunye Discover blogger ukubhala ngemisebenzi yezimboni yezolimo eHawaii. Enye i-imeyili ikhombisa i-Entine exhuma iKloor noRebecca Goldin eGeorge Mason University ukuxoxa "ngokuhlukunyezwa kwe-FOIA." UGoldin usebenza nowayengumqashi we-Entine i-STATS, iqembu lezintatheli elizichaze njengeumkhankaso we-disinformation”Lokho isebenzisa amaqhinga kagwayi kuya kwakha ukungabaza ngengozi yamakhemikhali.
Kwenye i-imeyili evela ngo-Okthoba 2014, uKloor wayeyintatheli kuphela owayefakwe kwi-imeyili exwayisa inkampani yakwaKetchum yezobudlelwano bomphakathi mayelana ukusebenza okungenzeka kube nokugenca kumawebhusayithi ezinkampani yiqembu elingaziwa. I-imeyili ithunyelwe ngu- U-Adrianne Massey, umphathi omkhulu weBiotechnology Industry Association (BIO), eqenjini lababambisene nabo embonini, kufaka phakathi i-Entine.
“Angazi nakancane ukuthi hlobo luni lokuhlaselwa. Izinhlangano ezizimele kungenzeka kube yizo kuphela ezihlose ukuzenza, kepha angifuni ukuthi kulimale noma ngubani kini onibona njengabalingani bezimboni, ”kubhala uMassey.
U-Kloor ungenile ku-imeyili ngu UDkt. Channapatna Prakash, ummeli nomphathi weGMO eTuskegee University. Okunye okufakwe ku-imeyili kwakunguJay Byrne (owayengumqondisi wezokuxhumana kwezinkampani eMonsanto), I-Val Giddings (owayeyisekela likamongameli wenhlangano yezohwebo ye-biotech), UKarl Haro von Mogel (umqondisi wezindaba we Kwenziwe kabusha), UBruce Chassy noDavid Tribe (ababambisene nabo Ukubuyekezwa kwezifundo zeqembu eliphambili leMonsanto), kanye nabanye ababambisene nomkhakha abalulekile abakhuthaza ama-GMO baphinde bagqugquzele ukwehliswa kwemithetho UKevin Folta, Henry Miller, UDrew Kershen, UKlaus Ammann, UPiet van der Meer futhi UMartina Newell-McGloughlin.
Abasizi bemboni bavame ukuthuthukisa umsebenzi kaKloor; bona ama-tweets ngo URobb Fraley waseMonsanto, UJon Entine, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project kanye nemboni yezolimo iqembu lokuhweba i-CBI.
"Uthando Olungapheli lukaKeith Kloor ngama-GMO, ”NguPaul Thacker, Huffington Post
Greenpeace Ikhasi lokubuka labangcolisi kuKeith Kloor
"Izintatheli Kukhulunywe ngazo Ezikhungweni Zethu ze-FOIA, ”US Ilungelo Lokwazi
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO, Uphenyo lwethu Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, U-Adrianne Massey, BASF, Bayer, UBill Nye, Bio, Kwenziwe kabusha, Iphrojekthi Ye-Biotech Literacy, Inhlangano Yezimboni Ye-Biotechnology, UBruce Chassy, I-CBI, I-Channapatna Prakash, ICornell Alliance yeSayensi, UDavid Tribe, Thola umagazini, DowDuPont, UDrew Kershen, ESG MediaMetrics, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, UGeorge Mason University, Izimpendulo ze-GMO, Henry Miller, Izinkinga Kwezesayensi Nobuchwepheshe, UJay Byrne, UJon Entine, UKarl Haro von Mogel, UKeith Floor, UKetchum, UKevin Folta, UKlaus Ammann, UMartina Newell-McGloughlin, Monsanto, Nature, Iphephabhuku lezemvelo, University of New York, incwadi evulekile eya kuBill Nye, UPiet van der Meer, URebecca Goldin, URobb Fraley, Isayensi Insider, IZIBALO, Syngenta, I-Tuskegee University, UC Davis, University of Florida, University of Illinois, I-Val Giddings
Ifilimu ye-Food Evolution GMO Ikhonza I-Ajenda Yezimboni Zamakhemikhali
Posted on February 4, 2018 by UStacy Malkan
Lokhu okuthunyelwe kubuyekezwe ngezibuyekezo ze-Food Evolution:
Incwadi evela ezifundweni ezingama-45: “I-Food Evolution ifanelwe ukubizelwa lokho okuyikho: isiqeshana senkulumo-ze"
Incwadi evela ososayensi abacwaninga i-University of Minnesota: “Ibhayisikobho ye-Food Evolution inkulumo-ze yebhizinisi lezolimo"
UProfesa we-NYU uMarion Nestle: I-Food Evolution “Ucezu olushubile lwenkulumo-ze yomkhakha we-GMO"…" Ngicele kaninginingi ukuthi ngisuse isiqeshana sami sengxoxo esifushane kule filimu. Umqondisi uyenqaba. Ukholelwa ukuthi ifilimu yakhe ilungile futhi ilinganisiwe. Ngeke." Landelela okuthunyelwe nguMarion Nestle: “Ukunqoba kwama-GMO trolls: le bhulogi ayisamukeli imibono"
UMichael Pollan: “Isipiliyoni sami futhi ngithatha okufanayo”Futhi“Le movie ixhaswa yizimboni"
UProfesa Ohlangene we-UC Berkeley u-Alastair Iles: "Akukho kwemvelo ekucabangeni ku-Food Evolution"
UC Berkeley UProfesa Miguel Altieri: “Ukuziphendukela Kwemvelo Kokudla inkulumo-ze yokuxhasa umphakathi ngama-GMO"
UDoug Durian-Sherman, PhD: "Ukuziphendukela kwemvelo kokudla kusekela ama-GMO, kepha hhayi iSayensi" Ingxenye 1 futhi Ingxenye 2
Isihloko seVice: “Le Dokhumentari Ifuna Ukufundisa Abantu Ngama-GMO, Kepha Ochwepheshe Bayibiza NgePropaganda"
I-Alternet nguStacy Malkan: “Abalandeli bakaNeil deGrasse Tyson Owes Fans a Ingxoxo Ethembekile Ngaphezulu Mayelana nama-GMO"
NguStacy Malkan, 6/19/2017
Eminye imizamo yokuthumela imiyalezo embonini inzima kakhulu bagcina beqhakambisa amaqhinga abo we-PR ukwedlula umyalezo abazama ukuwudlulisa. Leyo yinkinga nge Ukuvela Kokudla, idokhumentari entsha yomqondisi oqokwe yi-Academy Award uScott Hamilton Kennedy futhi ilandiswa nguNeil deGrasse Tyson.
Le filimu, evulwa emashashalazini ngoJuni 23, ithi inombono oqondile ngempikiswano mayelana nokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo, kepha ngesethulo sayo esinefilosofi yesayensi nedatha, iphuma ibukeka njengecala lezincwadi lenkulumo-ze yenkampani embonini yezolimo kanye izitshalo zayo ze-GMO.
Ukuthi inhloso yefilimu okuhloswe ngayo ukuthi isebenze njengemoto ethuthela imiyalezo embonini akuyona imfihlo. Ukudla Evolution kwaba kuhlelwe ngo-2014 futhi ixhaswe yi-Institute for Food Technologists, iqembu labahwebi, ukuqeda umzamo wokuthumela imiyalezo iminyaka eminingi.
I-IFT ixhaswe ngokwengxenye ngu izinkampani ezinkulu zokudla, kanye neqembu umongameli ngaleso sikhathi kwakunguJanet Collins, owayengumphathi weDuPont noMonsanto ngubani manje kuyasebenzela ICropLife America, inhlangano yokuhweba ngezibulala-zinambuzane. UMongameli Okhethiwe we-IFT USindi Stewart usebenzela iDuPont.
I-IFT ikhethe uKennedy ukuthi aqondise ifilimu, kodwa yena nomkhiqizi uTrace Sheehan bathi babenakho ukulawula ngokuphelele ifilimu abayichaza njengophenyo oluzimele ngokuphelele ngesihloko sama-GMO kubandakanya yonke imibono.
Ukwethembeka kwefilimu kunenkinga yokuzikhethela kwabo ukwamukela kuphela isayensi nososayensi abahambisana nabadlali bemboni yamakhemikhali abazuza kuma-GMO kanye namakhemikhali asetshenziswa kuwo, kuyilapho benganaki isayensi nedatha engahambelani naleyo ajenda.
Ukwelashwa kweMonsanto Science
Isibonelo esisobala sokungathembeki kwesayensi kuFood Evolution yindlela ifilimu esebenza ngayo ne-glyphosate. Ikhemikhali yokubulala ukhula isenhliziyweni yendaba ye-GMO, kusukela Ama-80-90% wezitshalo ze-GMO zenzelwe izakhi zofuzo ukubekezelela i-glyphosate.
IFood Evolution ibika ukuthi ukwanda kokusetshenziswa kwe-glyphosate ngenxa yama-GMO akuyona inkinga, ngoba i-glyphosate iphephile. Imithombo emibili isungula lesi simangalo kwifilimu: umlimi uthi i-glyphosate "inobuthi obuncane kakhulu; iphansi kunekhofi, iphansi kunosawoti, ”noRobb Fraley kaMonsanto - ephendula owesifazane ezilalelini ombuza ngesayensi exhumanisa i-glyphosate nezinkinga zokuzalwa nomdlavuza - umtshela ukuthi konke lokho kuyisayensi embi," yi-pseudoscience. "
Yonke isayensi ephakamisa ukukhathazeka nge-glyphosate "yi-pseudoscience," kusho uMonsanto.
Akukho lapho kukhulunywa khona ngokukhathazeka kwe-carcinogenicity okugubuzele iMonsanto ku International isayensi ukukhwabanisa, noma abalimi abaningi Bamangalela iMonsanto esola ukuthi bathole umdlavuza ovela enkomishini ye-glyphosate-based Roundup herbicide.
Akukho lapho kukhulunywa khona ngombiko wango-2015 wenhlangano yomdlavuza yeWorld Health Organisation ebeka i-glyphosate njenge- kungenzeka i-carcinogen yomuntu, noma Isinqumo saseCalifornia ukufaka i-glyphosate ohlwini lweProp 65 lwamakhemikhali aziwa ukudala umdlavuza, noma izifundo ezibuyekezwa kontanga ezixhumene imiphumela engemihle yezempilo ukuze glyphosate futhi Roundup.
Esikhundleni sokubuka ubufakazi, i-Food Evolution inikeza ababukeli ukwelashwa okuphelele kwesayensi yeMonsanto: noma yisiphi isayensi esiphakamisa ukukhathazeka mayelana nezingozi zezempilo zemikhiqizo yezolimo kufanele zinganakwa, kuyilapho izifundo ezibeka leyo mikhiqizo ekukhanyeni okuwukuphela kwesayensi kufanele kuxoxwe ngakho.
Amazinga aphindwe kabili kuSayensi kanye nasekubonakaliseni izinto obala
Ukuphathwa ngokulinganayo kwezihloko zokuxoxwa ngemibono ehlukene bekuzosiza ukwethembeka kweFood Evolution. Esikhundleni salokho, ifilimu ipenda abagxeki be-GMO ebabonisa ngokungathembeki noma ukuzenzela inzuzo ngomkhakha wezinto eziphilayo, ngenkathi ishiya imininingwane ebalulekile ngemithombo yayo yezimboni.
Kwesinye isigcawu, umlingiswa ophambili wefilimu, uprofesa we-UC Davis u-Alison van Eenennaam, ukhulula ukuthi ukubonakala kwesiteji nomphathi weMonsanto empikiswaneni kungangcolisa igama lakhe lokuzimela. Ababukeli abakaze bafunde ukuthi wayejwayele sebenzela iMonsanto, noma ukuthi uphethe amalungelo obunikazi amaningi we-GE eziphakamisa intshisekelo yezezimali esihlokweni esiseduze.
Usosayensi we-Pro-industry Pamela Ronald, omunye umthombo oyinhloko wesayensi, uthola ukwelashwa kweqhawe ngaphandle kokusho lokho ezimbili zezifundo zakhe zihoxisiwe. Yize kunjalo ababukeli bashaywa ngesando ngezindaba zokuthi ucwaningo olwenziwe ngusosayensi waseFrance uGilles-Eric Séralini - oluthola izinkinga zezinso nezicubu kumagundane afunzwa ummbila weGMO - "luhoxisiwe, lwahoxiswa, lwahoxiswa!"
Ifilimu ishiya iqiniso lokuthi isifundo bekuyi yaphinde yashicilelwa, futhi wahoxiswa endaweni yokuqala ngemuva kwesisebenzi sangaphambili seMonsanto uthathe isikhundla sokuhlela nephephabhuku lapho lashicilelwa khona ekuqaleni.
Ukulandisa kwe- “Africa Needs GMOs”
Kokunye ukulandisa okuphindwe kahle, iFood Evolution ithatha ababukeli ohambweni lomzwelo oluya ezweni elisathuthuka, nakwenye ithrekhi yemiyalezo yomkhakha oyintandokazi: kunokugxila ekutheni ubuchwepheshe bezakhi zofuzo busetshenziswa kanjani ohlelweni lwethu lokudla manje - ikakhulukazi ukudlulisa ukubekezelelana kwe-herbicide - kufanele gxila ekutheni ingasetshenziswa kanjani ngokuzayo.
Njengoba kunesikhathi esiningi se-air and tension eshubile, le filimu ihlola inkinga ye-banana wilt, isifo esibulala izitshalo eziyisisekelo e-Afrika, futhi iholela ababukeli ukuthi bakholelwe ukuthi ubuchwepheshe bezakhi zofuzo buzosindisa isivuno, abalimi kanye nomphakathi.
Kungenzeka. Kepha ifilimu ayikunaki ukusho ukuthi ubuchwepheshe bomsindisi we-GE abukatholakali futhi kungenzeka bungasebenzi. Ngokusho kwephepha ku- Isitshalo se-Biotechnology Journal, ukumelana okuboniswa kulebhu kunamandla kepha kungahle kungahlali isikhathi eside ezindaweni ezivulekile.
Le filimu “iwukungathembeki okuyisisekelo.”
Okwamanje, isixazululo se-low-tech sisebenza kahle futhi kubukeka sengathi singasebenzisa imali ethile. Ngokusho kwephepha lika-2012 kwi Ijenali Yezentuthuko Nezomnotho Wezolimo, izikole zabalimi, ezisiza abalimi ukuthola ulwazi lwezandla ngamasu okuvimbela ukubola kwebhanana, kwaholela ekwehliseni amazinga okutheleleka nokubuyiswa kwezitshalo okuphezulu e-Uganda. Imiphumela yezikole zabalimi “iye yaphawuleka,” ngokwe-UN.
Isixazululo asidingi ukuthi kukhulunywe ngakho ku-Food Evolution.
"Ngokuyisisekelo ukungathembeki kwefilimu ukuthola isisombululo se-GE esingahle singasebenzi, njengoba ososayensi uqobo bevuma," kusho uMichael Hansen, usosayensi omkhulu we-Consumers Union, "ngenkathi ehluleka ukukhomba enye indlela yokulawula inkinga esebenza kakhulu kahle, kepha akubandakanyi ukuthengisa umkhiqizo ukuze wenze imali. ”
Ngabe iMonsanto yayihlangene ne-Food Evolution?
IMonsanto nabalingani bayo bebekhuluma ngezinhlelo zedokhumentari ngasekupheleni kuka-2013, ngokusho kuka ama-imeyili atholakele ngu-US Ilungelo Lokwazi. Ama-imeyili awanabo ubufakazi obuxhumanisa lezo zingxoxo ne-Food Evolution, kepha basungula isifiso sikaMonsanto ngefilimu esizwakala sifana kakhulu naleso esidalwe nguKennedy.
U-Eric Sachs weMonsanto yabhala ngoDisemba 2013 eqenjini labeluleki be-PR, “kusobala ukuthi intshisekelo enkulu yokulandela ifilimu eliyi-documentary. Okubaluleke kakhulu, ukuvumelana ngukuthi ukubamba iqhaza kukaMonsanto kwamukelekile, ikakhulukazi esigabeni sokuhlela. ”
Wancoma ukubizwa kocingo lokuhlela lukaJanuwari 2014. UJon Entine we Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project wakhuphuka wahola, futhi wathi "uthole isibambiso sakhe esingu- $ 100,000 kumuntu ongusomabhizinisi ozimele uma singathola" (wonke umugqa unqanyuliwe). I-Entine futhi inokuxhumana ne-Institute for Food Technologists; ukhulume ngo “ubushoshovu bokulwa nokudla”Emhlanganweni wonyaka we-IFT wango-2012.
Omunye umuntu okukhulunywe ngaye kuma-imeyili eMonsanto, UKarl Haro von Mogel - ngubani owayexoxile nge-Sachs "Ukwehla kwefilimu exhaswe yi-'Big 6 '” futhi kwaphakanyiswa ukuthi "okungabaluleke ngaphezu kwemali yabo ukubamba iqhaza kwabo" - kwaxoxwa nabo kuFood Evolution, futhi wabandakanyeka nasekuqopheni isigcawu esisodwa, esikisela abanye ekusithekeni ukuxhumana nabenzi bamafilimu.
Ephendula ama-imeyili, uKennedy ubhale on Twitter: “@Foodevomovie has had ZERO $ or INPUT from #Imonsanto. Sisobala ngokuphelele futhi sijabule 2 sinengxoxo esekelwe eqinisweni. ”
Uthe enkulumweni yakhe, "lokho kushintshaniswa kwama-imeyili bekungahlangene nakancane nephrojekthi yethu ...
Abantu ekushintshaneni nge-imeyili bebengabandakanyeki ekuqopheni nasekululekeni, usho kanjalo, kanti uKarl Haro von Mogel “ubeyisihloko kule filimu futhi ebengenaqhaza noma ithonya kunoma yiziphi izinqumo zokudala / zokuhlela ngale filimu nganoma yisiphi isikhathi embonisweni . Futhi kungasiza ukuveza ukuthi ingxoxo ye-imeyili obhekise kuyo yenzeka kudala singakaze sazi uKarl noma omunye walaba bantu. ”
Sneak Peek Behind the Scene
Okunye ukushintshaniswa kwe-imeyili okutholwe yi-US Right to Know inikeza ukubonwa ngemuva kwezigcawu ekuthuthukisweni kokulandisa ku-Food Evolution. Ukushintshisana kubonisa ukufuna kukaKennedy izibonelo azofaka “thina / izwe elisathuthuka sidinga i-GMO.”
“Noma yimuphi omunye umhlaba 'wethu / osathuthuka udinga i-GMO' unganginika amagama eceleni kwamawolintshi? Ulethisi weShintakus? ” Kubuza uKennedy. Umkhiqizi uTrace Sheehan uphendule ngohlu lwemikhiqizo ye-GMO kubandakanya irayisi elibekezelela isomiso, amakinati angenalo igciwane, amazambane angenayo i-carcinogen… “bese ufaka inkinobho yeGolden Rice.”
Ngenkathi uKennedy efuna "izitshalo eziphezulu ze-GMO ezisetshenziswayo njengamanje, nokuthi imaphi amazwe," uMark Lynas we ICornell Alliance yeSayensi ubhale wathi, "Ngempela iBt brinjal eBangladesh iyona kuphela eyi-GMO futhi esebenza kabanzi."
Ukubikwa kwefilimu okuqhutshwa ifreyimu kuyishaya indiva leyo mininingwane ngokungabi bikho kwezixazululo ze-GMO ezisebenzayo, futhi akusho ukuthi isibonelo esisondelene kakhulu, i-Vitamin-A ethuthukisiwe yeGold Rice, namanje ayitholakali ngaphandle kokutshalwa kwemali okukhulu neminyaka yokulingwa, ngoba akusebenzi kahle ensimini njengama-rice akhona manje.
Esigcawini okufanele sidlulise ukwethembeka kwesayensi, iFood Evolution ikhanyisa uphawu lwe-American Council on Science and Health okwamanje uNeil deGrasse Tyson uthi kukhona ukuvumelana komhlaba wonke mayelana nokuphepha kwama-GMO. Isiliphu esifanelekayo. ASCH kuyinto iqembu langaphambili lebhizinisi kuhambelana eduze neMonsanto.
Indawo ye-logo ye-ACSH nayo iyavela ngemuva kulokhu Isiqeshana semizuzu engu-2 kusuka enkulumweni yakamuva yeClimate One, njengoba uKennedy ephikisana nesiphakamiso sokuthi ifilimu yakhe iyinkulumo-ze.
“Sinquma kanjani ukuthi yini inkulumo-ze?” Kubuza uKennedy. “Ngithi enye yezindlela esikwenza ngayo (ukubuza), ingabe imiphumela iyacelwa, noma imiphumela ithenjisiwe? Angibuzwanga ngemiphumela futhi angithembisanga imiphumela. Uma unenkinga ngefilimu, inkinga ikimi. ”
Lokhu kubuyekezwa kwavela ekuqaleni Huffington Post futhi bekulokhu liphinde lanyatheliswa ku-Alternet.
Bona futhi: I-athikili yokulandelela kaStacy Malkan, Abalandeli bakaNeil deGrasse Tyson Owes Ingxoxo Ethembekile Ngama-GMO kune-Food Evolution. "Ukuxoxisana nabanye abahlaziyi beGMO abambalwa abavela kule filimu, noma bacelwa ukuba babe kuyo, kufakazela isithombe senqubo engajwayelekile ebandakanya ukuqoshwa ngokunyenya, ukuhlelwa kokukhetha, ukumelwa ngendlela engeyiyo nokungadalulwa mayelana nokuxhaswa kwefilimu."
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO U-Alison Van Eenennaam, Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, USindi Stewart, ICornell Alliance yeSayensi, CropLife Melika, Dupont, U-Eric Sachs, Ukuvela Kokudla, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, GMO, Isikhungo Sabadwebi Bezokudla, UJanet Collins, UJon Entine, UKarl Haro von Mogel, UMark Lynas, Monsanto, Neil deGrasse iTyson, Pamela Ronald, URobb Fraley, UScott Hamilton Kennedy, Landela uSheehan, UC Davis
Posted on Kwangathi 9, 2016 by UStacy Malkan
Ukuhlolwa okuqhubekayo kwe-Environmental Protection Agency kwe-herbicide esetshenziswa kakhulu emhlabeni sekuqala ukudala imibuzo eminingi kunezimpendulo. NgoMsombuluko, kuphinde kwavela "oops" abakhulu be-EPA.
NgoLwesihlanu, ngomhlaka-29 Ephreli, i-EPA yathumela kuwebhusayithi yayo uchungechunge lwamaphepha ahlobene nokuhlolwa kwayo okwakulindelwe isikhathi eside kwe-glyphosate, isithako esisebenzayo eMonsanto's Roundup herbicide neminye imikhiqizo yokubulala ukhula edayiswa emhlabeni wonke. Ukuhlolwa kobungozi kuqale ngo-2009 futhi bekufanele kuphothulwe ngo-2015. Kodwa imibuzo yokuthi i-glyphosate ingawudala umdlavuza noma cha iyawubuyekeza lo msebenzi, futhi yehlise inqubo.
NgoMsombuluko, ngemuva kokuthi okuqukethwe yimibhalo kuqale ukudala imibuzo kwabezindaba, i-EPA yawafaka lawo madokhumende kwiwebhusayithi yayo:
Okhulumela i-ejensi uthe lokhu:
“Imibhalo yeGlyphosate yathunyelwa ngephutha edokodweni le-Agency. Le mibhalo manje seyisusiwe ngoba ukuhlolwa kwethu akukona okokugcina. I-EPA ayikakuqedi ukubuyekeza kwethu umdlavuza. Sizobheka umsebenzi wabanye ohulumeni kanye nomsebenzi owenziwa yi-HHS's Agricultural Health Study njengoba sithatha isinqumo se-glyphosate. Ukuhlola kwethu kuzobuyekezwa kontanga bese kuqedwa ngasekupheleni kuka-2016. ”
I-EPA ithe "isebenza ngezinto ezithile ezibalulekile zesayensi kwi-glyphosate, kufaka phakathi izinsalela zamakhemikhali obisi lwebele lomuntu;" "izigameko ezijulile zabantu kanye nokuhlolwa kwezifo ezithathelwanayo;" kanye nokuhlaziywa kokuqala kobuthi be-glyphosate ku-milkweed, isisetshenziswa esibucayi se-monarch butterfly.
Kungaziwa noma cha, enye yalezo zincwadi ezithunyelwe zabe sezihoxiswa kwakuyi-doozy, isando esisindayo esifuna ukudiliza izinkathazo mayelana nezibopho ze-glyphosate nomdlavuza. I-ejensi ikhiphe Imemorandamu yangaphakathi ye-EPA ka-Okthoba 1, 2015 kwikomidi layo lokuhlola umdlavuza (CARC) eliphikisayo okutholwe ngoMashi 2015 yiNhlangano Yezempilo Yomhlaba 's I-International Agency for Research on Cancer (IARC) ehlukanisa i-glyphosate njenge-carcinogen yabantu. I-EPA ithole ukuthi i-glyphosate “Akunakwenzeka ukuthi ibe yiCarcinogenic kubantu.”
Imemorandamu yathi ukuhlukaniswa kwabo kwakususelwa “ekucabangeni kwesisindo sobufakazi.”
I-CARC isho lokhu:
“Ubufakazi besifo ngalesi sikhathi abusekeli ubudlelwano obuyimbangela phakathi kokuvezwa yi-glyphosate kanye nezicubu eziqinile. Abukho futhi ubufakazi bokuxhasa ubudlelwano obuyimbangela phakathi kokuvezwa kwe-glyphosate kanye nezicubu ezingekho eziqinile ezilandelayo: i-leukemia, i-myeloma eminingi, noma i-Hodgkin lymphoma. Ubufakazi besifo ngalesi sikhathi abuhambelani ebudlelwaneni obuyisisekelo noma obucacile bokuhlangana phakathi kwe-glyphosate ne-NHL. Izifundo eziningi zokulawulwa kwamacala kanye nesifundo esisodwa sabantu abazoba iqembu alitholanga nhlangano; kanti, imiphumela evela kwinani elincane lezifundo zokulawulwa kwamacala (ikakhulukazi eSweden) yaphakamisa inhlangano. ”
UMonsanto ubabaze futhi wathumela ku-twitter ukukhishwa kombhalo, okulandela ukukhishwa yi-EPA kwe imemorandamu ehlukile ukusekela ukuphepha kwe-glyphosate ngoJuni odlule. Isimemo esisha kunazo zonke sinikeza inkampani ubufakazi obungeziwe bokuzivikela ngokuqongelelwa kwamacala afakwe ngabasebenzi bezolimo nabanye abasola ukuthi i-Roundup herbicide kaMonsanto esekwe eglyphosate yabanikeza umdlavuza.
"Lesi yisikhundla esiphezulu se-EPA sokuphepha komkhiqizo — benza nomsebenzi omuhle wokuchaza wonke amaphutha e-IARC," kusho isikhulu seMonsanto Chief Technology Officer uRobb Fraley esitatimendeni esithunyelwe ku-twitter.
IMonsanto ibilokhu icele i-EPA ukuthi ivikele i-glyphosate ezinsolweni zomdlavuza selokhu kwaphuma isigaba se-IARC ngoMashi 2015. A Mashi 23, 2015 Intambo ye-imeyili ye-EPA ikhishwe njengengxenye yemininingwane yesicelo senkululeko yolwazi ngemizamo kaMonsanto yokwenza i-EPA "ilungise" irekhodi ku-glyphosate "njengoba kuhlobene nokubangwa komzimba."
Omunye umqulu osanda kukhishwa yi-EPA - okwabuye kwahoxiswa - ibonisa ukuthi kungani ukuhlolwa kobungozi be-EPA ngokuphepha kwezindaba ze-glyphosate kakhulu. Kumemorandamu yango-Okthoba 22, 2015, i-EPA ichaze kabanzi ukuthi i-glyphosate isetshenziswa kangakanani ezintweni zokudla.
Leyo memo ivuselela ukulinganiselwa kokusetshenziswa kwe-glyphosate ezitshalweni ezifundeni eziphezulu zezolimo, futhi inikezela ngokulinganiselwa kokusetshenziswa konyaka okulinganiselwe kweminyaka eyishumi ka-2004-2013. Izitshalo ezingamashumi ayisikhombisa zisohlwini lwe-EPA, kusuka ku-alfabhethi kusuka ku-alfalfa nama-alimondi kuya kumakhabe nokolweni. IGlyphosate esetshenziswa emikhakheni yesoya, njalo ngonyaka, ikhonjwe kumakhilogremu ayizigidi ezingama-101.2; ngokusetshenziswa okuhlobene nommbila kumakhilogremu ayizigidi ezingama-63.5. Zombili lezo zilimo zenziwe ngezakhi zofuzo ngakho-ke zingafuthwa ngqo nge-glyphosate njengoba abalimi belapha amasimu okhula. Ukotini ne-canola, nakho okwakhiwe ngokwezakhi zofuzo ukuze kube nokubekezelela i-glyphosate, nakho kunezinombolo ezisetshenziswa kakhulu. Kepha ukusetshenziswa okuphawulekayo kwe-glyphosate kubonakala nangamawolintshi (3.2 million lbs); amabele (3 million lbs); ama-alimondi (ama-2.1 million lbs); amagilebhisi, (1.5 million lbs); ubhamubhamu nama-apula (ama-400,000 lbs ngamunye); nezinhlobonhlobo zezithelo, imifino namantongomane.
Ngaphandle - noma mhlawumbe ngenxa - yokubambezeleka kokukhishwa kokuhlolwa kokugcina kokulawulwa kobungozi ku-glyphosate, imibuzo mayelana nomthelela wekhemikhali empilweni yomuntu nasemvelweni ibilokhu ikhula. Ngaphezu kwamacala athi i-glyphosate idale umdlavuza kubasebenzi basemapulazini nakwabanye, amaqembu azimele agijimisana nokuhlola imikhiqizo yokudla enhlobonhlobo yezinsalela ze-glyphosate.
Ngolwesihlanu icala ngokushintshwa okusha kokukhathazeka nge-glyphosate kwafakwa eNkantolo Yesifunda yase-US eSan Francisco. Leyo suti, efuna isimo sesigaba, ithi izinsalela ze-glyphosate ezitholakala eQuaker Oats zivala izimangalo zeQuaker Oats Co zokuthi umkhiqizo wayo ungokwemvelo ngokuphelele. "IGlyphosate i-biocide yokwenziwa futhi ingadala umdlavuza womuntu, enezingozi ezengeziwe zezempilo ezaziwa ngokushesha," kusho icala. "Uma umkhiqizo uthi 'Uyi-100% Yemvelo,' abathengi abagcini ngokuvuma ukukhokha imali ethe xaxa ngalo mkhiqizo, balindela ukuthi ungabi nazo izibulala-zinambuzane,” kusho icala.
Imibuzo nge-glyphosate seyande kakhulu kangangoba uMmeli wase-US u-Ted Lieu ubhalele izikhulu ze-EPA incwadi ngoDisemba ecela ososayensi be-EPA ukuthi bahlangane neqembu lososayensi abazimele ukuthi babheke "imininingwane ehluphayo" ephathelene ne-glyphosate. U-Lieu ubalule ukukhathazeka kokuthi i-EPA incike kwimininingwane esekelwa yi-Monsanto kunocwaningo oluzimele, olubuyekezwa ngontanga ekuhloleni i-glyphosate. Imithombo esondelene nalesi simo ithi kuhlelwe ukuthi umhlangano ube ngoJuni 14, yize bobabili ihhovisi le-EPA kanye noLieu benqabile ukuphawula.
Ukukhuthala kwe-EPA ekumbeni imibuzo nokukhathazeka kwe-glyphosate kuyakhuthaza kulabo abafuna ukubona ukuthi kwenziwa ukuhlolwa okuphelele kobungozi. Kepha ukubambezeleka nezenzo ezingabazekayo ngokukhipha imibhalo bese uzihoxisa emehlweni omphakathi akunikezi ukuzethemba.
Ngempela, kwesinye isinyathelo sokufuna ukwazi, i-EPA ngoMeyi 2 futhi ikhiphe nohlelo olusha olusha olusha “lokubuyekezwa kokubhaliswa.“Kepha ngenkathi ezinye izindlela zokuhlolwa kobungozi zamakhemikhali zibhalwe kuwebhusayithi ye-EPA ezokhishwa ngasekupheleni kuka-2016, i-glyphosate ibingafakwanga.
Lesi sihloko ekuqaleni savela Huffington Post
UCarey Gillam uyintatheli yakudala yaseReuters, umbhali / umhleli wamanje ozimele kanye nomqondisi wezocwaningo we-US Right to Know, iqembu elicwaninga ngomkhakha wezokudla. Mlandele kuTwitter @CareyGillam
Ukudla Okucatshangwayo, izibulala-zinambuzane Ikomidi Lokubuyekeza Ukuhlolwa Komdlavuza, I-CARC, UCarey Gillam, EPA, glyphosate, Monsanto, I-Quaker Oats Co., URobb Fraley, RoundUp